कसरी व्यापार सफलता को लागी वेब प्रतिलिपि लेख्न को लागी - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / कसरी व्यापार सफलता को लागी वेब प्रतिलिपि लेख्न को लागी
हाम्रो अनुकूलन उत्पादन लाइन हाम्रो नियमित वार्षिक मर्मतका लागि बन्द हुनेछ (जनवरी २४ - फेब्रुअरी ६)। कृपया जटिल अर्डरहरूको लागि सामान्य टर्नअराउंड समय भन्दा लामो समयको लागि योजना बनाउनुहोस्।
कसरी व्यापार सफलता को लागी वेब प्रतिलिपि लेख्न को लागी
केहि इन्टरनेट व्यवसायहरु अरु भन्दा धेरै सफल छन्। सफल व्यवसायहरु ती हुन् जसले शक्तिशाली र प्रेरक वेब प्रतिलिपि लेख्न सिकेका छन्।
त्यहाँ धेरै थोरै व्यवसायहरु छन् कि इन्टरनेट को उपयोग गर्दैनन् यी दिनहरु। अझै केहि इन्टरनेट व्यवसायहरु अरु भन्दा धेरै सफल छन्। के फरक पार्छ? सफल ती हुन् जो बाध्यकारी वेब प्रतिलिपि को उपयोग गर्दछन्।
त्यसोभए यो निम्नानुसार छ कि यदि तपाइँ तपाइँको इन्टरनेट ब्यापार मा सफल हुन चाहानुहुन्छ, तपाइँ सिक्न को लागी वेब प्रतिलिपि कि शक्तिशाली, प्रेरक, र सम्मोहक छ लेख्न को लागी आवश्यक छ। यस मा मामला, essaywriter.nyc यो कसरी गर्न को लागी केहि सुझावहरु बाहिर काम गरीयो।
तपाइँको आगन्तुक मा फोकस नगर्नुहोस्
मानिसहरु तपाइँको साइट मा किन आउँछन्? तपाइँ र तपाइँको जीवन इतिहास को बारे मा पत्ता लगाउन को लागी छैन। अझै यो आश्चर्यजनक छ कि वेब प्रतिलिपि सबै साइट मालिक को बारे मा छ।
तपाइँको बारेमा बिर्सनुहोस् र आगन्तुक को दृष्टिकोण बाट तपाइँको साइट मा हेर्नुहोस्। उनीहरु तपाइँको साइट मा हेरिरहेका छन् पत्ता लगाउन को लागी यदि तपाइँ जो पनी उनीहरु खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि उनीहरु यो पहिलो केहि सेकेन्ड मा देख्दैनन्, उनीहरु मा सार्नेछन्।
तपाइँको आगन्तुक के खोज्दै हुनुहुन्छ?
त्यसोभए तपाइँका आगन्तुकहरु तपाइँको साइट मा किन आउँछन्? को विशाल बहुमत मा घटनाहरू, उनीहरु एक खोज इन्जिन को माध्यम बाट आउँछन्। उनीहरु एक खोज शब्द मा व्यक्त गरीरहेका छन् समस्या उनीहरुसंग छ वा उनीहरु समाधान खोजिरहेका छन्।
तेसैले उनीहरु लाई उनीहरुको प्रश्न को जवाफ वा उनीहरुको समाधान को लागी देख्न आवश्यक छ समस्या सिधा अगाडि। यदि उनीहरु पहिले अप्रासंगिक सामग्री को एक धेरै को माध्यम बाट हल छ, उनीहरु गर्दैनन् - उनीहरु अर्को साइट मा जानेछन्।
कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यो वेब प्रतिलिपि लेखन मा कीवर्ड को उपयोग को महत्व मा जोड दिन्छ। तपाइँको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरु र वाक्यांशहरु को वरिपरि तपाइँको सामग्री बनाउनुहोस्, ताकि आगन्तुकहरु जो ती शब्दहरु र वाक्यांशहरुमा टाइप गरीएको छ उनीहरुलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरु देख्नेछन्। यसले उनीहरुलाई पढ्न जारी राख्न प्रोत्साहित गर्दछ। (प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरु ती हुन् जो अत्यधिक खोजिएका छन् तर कम प्रतिस्पर्धा संग।)
भर्न बाट बच्नुहोस्
निस्सन्देह, तपाइँ खोजशब्द भरने बाट बच्नै पर्छ, कि तपाइँको वेब प्रतिलिपि मा धेरै पटक कीवर्ड को उपयोग गरीरहेको छ। यो खोज इन्जिनहरु लाई तपाइँ प्रतिबन्ध गर्न को लागी कारण हुनेछ। कुल सामग्री को बारे मा 5-8 प्रतिशत को एक आवृत्ति संग तपाइँको प्रतिलिपि भर मा उनिहरु लाई समान रूप बाट समान रूपमा फैलाउनुहोस्।
त्यहाँ हजारौं, वा शायद लाखौं, इन्टरनेट मा साइटहरु छन्। कुनै फरक पर्दैन के तपाइँको साइट को बारे मा छ, त्यहाँ लगभग पक्कै पनी उही विषय मा धेरै धेरै अरु हुनेछन्। त्यसोभए किन आगन्तुक तपाइँको प्रस्ताव मा रुचि राख्नु पर्छ, अरु को सट्टा?
एक अद्वितीय बेच्ने प्रस्ताव को पहिचान
तपाइँको उत्पादन वा सेवा को लागी यूएसपी - त्यो हो, केहि हो कि यो तपाइँको सबै प्रतियोगीहरु बाट फरक छ। एक पटक तपाइँ यसलाई पहिचान गर्नुभएको छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका आगन्तुकहरु यो देख्ने बित्तिकै उनीहरु आउँछन्।
यसलाई हथौडा घर तपाइँको वेब प्रतिलिपि मा र यसको बारे मा विनम्र नहुनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले सन्देश पाउँछन्।
लाभ, लाभ, लाभ
यदि तपाइँ तपाइँको कीवर्ड को उचित उपयोग गरीरहनु भएको छ, तपाइँले सोच्नु भएको छ कि तपाइँको साइट मा आगन्तुकहरु के खोज्दैछन्। त्यसैले सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई तपाइँको वेब प्रतिलिपि मा प्रदान गर्नुहोस्।
तर कहिल्यै नबिर्सनुहोस् कि उनीहरु के खोज्दैछन् उनीहरुको समाधान हो समस्या, उत्पादन होइन। यदि यो तौल घटाउने हो, तपाइँ उनीहरुको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी एक उत्कृष्ट उत्पादन हुन सक्छ।
तर उनीहरु उत्पादन र यसको रासायनिक सूत्र को विस्तृत विवरण मा रुचि राख्दैनन्, तर शक्तिशाली यो हुन सक्छ। उनीहरु स्लिम हुन र आकर्षक देखिन, स्वस्थ रहन, विपरीत लि attract्गलाई आकर्षित गर्न, राम्रो लुगा लगाउन, आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गर्न को लागी हताश छन्।
Be स्पष्ट के लाभहरु को बारे मा तपाइँको ग्राहकहरु को लागी देखीरहनुभएको छ र यकीन गर्नुहोस् कि यो के हो उनीहरुको आँखा पकड्छ जब उनीहरु तपाइँको साइट सम्म पुग्छन्।
तपाइँको आगन्तुकहरुको हेरचाह गर्नुहोस्
मानिसहरु आफुले चाहेको कुरा किन्छन्, उनीहरुलाई के चाहिन्छ। यो मार्केटि in मा केन्द्रीय अवधारणाहरु मध्ये एक हो। यदि तपाइँको वेब प्रतिलिपि सुक्खा र unappealing छ, उनीहरु चासो राख्दैनन्, भले पनि तपाइँ तपाइँको उत्पादन को सबै भन्दा विस्तृत विवरण र सबै कारणहरु किन उनीहरु लाई यो किन्नु पर्छ प्रदान गर्नुहोस्।
"भावनात्मक प्रतिलिपि" सिर्जना गर्न सिक्नुहोस्
प्रतिलिपि गर्नुहोस् कि भावनात्मक ट्रिगरहरु बाट यति भरिएको छ कि उनीहरु यसको प्रतिरोध गर्न सक्षम छैनन्। यसलाई यति शक्तिशाली बनाउनुहोस् कि उनीहरु तुरुन्तै सोच्दछन् "मैले त्यो पाएको छु!"
अवश्य पनि, यो भन्दा वेब प्रतिलिपि लेख्न को लागी अधिक छ। तर यदि तपाइँ यी सिद्धान्तहरुको पालना गर्नुहुन्छ, तपाइँ आफ्नो सफलता दर सुधार गर्ने बाटो मा राम्रो संग हुनेछ।
अंग्रेजी व्याकरण बुझ्नुहोस् र प्रभावी वेबसाइट सामग्री लेख्नुहोस्
स्वतन्त्र लेखकहरु प्राय: वेबसाइट सामग्री को उत्पादन गर्न को लागी कार्यरत छन् कि वेब पेज आगन्तुकहरु मा एक प्रभाव हुनेछ।
चाहे यो विज्ञापन को नक्कल हो, मानिसहरु लाई एक उत्पादन किन्न को लागी बिन्ती, वा प्रेरक प्रतिलिपि एक वेबसाइट प्रदान गर्दछ कि सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी मानिसहरुलाई प्रोत्साहित, सक्रिय आवाज र निष्क्रिय आवाज को बीच एक प्रभाव छ कि अचेतन तर महत्वपूर्ण छ।
सक्रिय आवाज मा, विषय कार्य गर्दछ। अन्य शब्दहरुमा, वाक्य मा विषय वाक्य मा क्रिया को रूप मा कार्य गर्दछ। उदाहरण को लागी, केटीले स्याउ खायो
निष्क्रिय आवाज मा, विषय यो गर्न को लागी केहि गरीएको छ वा एक कार्य यो मा प्रदर्शन गरीएको छ, वा केवल "भएको" को एक राज्य मा छ। उदाहरण को लागी, स्याउ खाइयो केटी द्वारा
निष्क्रिय र सक्रिय आवाज को उदाहरण
● सक्रिय: केटा किताबहरु बोक्छन्
● निष्क्रिय: किताबहरु केटा द्वारा लिइन्छ
● सक्रिय: बिरालोले बच्चालाई खरानी
● निष्क्रिय: बच्चा बिरालो द्वारा खरानी थियो
निष्क्रिय आवाज को लागी प्रयोग गर्दछ
धेरै व्याकरण-जाँच कार्यक्रमहरु निष्क्रिय आवाज झण्डा को रूप मा यदि यो व्याकरण को रूप मा गलत छ। यो हैन मामला.
त्यहाँ केहि परिस्थितिहरु छन् जहाँ निष्क्रिय आवाज बिल्कुल उपयुक्त छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि फरक बुझ्न र जान्न को लागी जब यो उपयुक्त छ।
निष्क्रिय आवाज यसको स्थान छ। यो अक्सर वैज्ञानिक लेखन मा वस्तुनिष्ठता वा अधिकार को उपस्थिति बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ, जस्तै
● औषधि 8 मा प्रभावकारी थियो घटनाहरू 10 बाहिर।
निष्क्रिय आवाज प्रायः राजनीतिक भाषणमा प्रयोग गरीन्छ वा परिस्थिति वा कार्यहरु को लागी जिम्मेवारी तोक्न वा जानबूझेर अस्पष्ट गर्न बाट बच्न को लागी।
उदाहरण को लागी, यदि वक्ता दिन चाहन्छ छाप कि उनी जान्दैनन् कि कसले केहि गरे वा उनी केहि गर्न को लागी उल्लेख गर्न चाहँदैनन्, उनी भन्न सक्छन् ...
● कागजात लीक भयो।
● नागरिक बम विष्फोटको क्रममा मारिएका थिए।
निष्क्रिय आवाज को हानि
निष्क्रिय आवाज अजीब, अस्पष्ट, र जटिल हुन सक्छ। यो लेख्न को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ जो सपाट देखिन्छ र पाठक संलग्न गर्दैन।
यो औपचारिक, कर्तव्यनिष्ठ, र अवैयक्तिक लाग्न सक्छ, ती सबै वेब आगन्तुक को लागी बन्द गरीरहेछन्।
वेब आगन्तुकहरु छिटो जानकारी चाहान्छन्
वेब साइट सामग्री पढ्न र बुझ्न को लागी सजिलो हुनु पर्छ। वेब पेज आगन्तुकहरु उनीहरुलाई चाहिने जानकारी को लागी पृष्ठ खोज्न स्क्यान गर्न जान्छन्।
एक सन्देश जो तुरुन्तै स्पष्ट छैन सधैं को लागी याद गर्न सकिन्छ यदि एक आगन्तुक क्लिक र साइट बाट टाढा जान्छ।
वेबसाइट सामग्री मा सक्रिय आवाज को लाभ
सक्रिय आवाज तत्काल र आकर्षक छ। यो पाठक आकर्षित गर्न र तिनीहरूलाई सामग्री संग संलग्न बनाउन सक्नुहुन्छ।
● निष्क्रिय: एक उपहार सबै नयाँ ग्राहकहरु लाई दिईन्छ।
● सक्रिय: सबै नयाँ ग्राहकहरु एक उपहार प्राप्त।
● निष्क्रिय: हाम्रो ई-पुस्तक नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ
● सल्लाह: हाम्रो मुक्त ई किताब डाउनलोड गर्नुहोस्
सक्रिय आवाज मा प्रतिलिपि लेखन अधिक डेलिभर हुनेछ स्पष्ट र वेबसाइट आगन्तुक को लागी प्रभावकारी सन्देशहरु।
सक्रिय आवाज आदेश वा निर्देशनहरु मा काम गर्न को लागी वेब आगन्तुक लाई प्रोत्साहित गर्ने अधिक संभावना छ मा जानकारी को उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गरिनु पर्छ।
लेखक को बारेमा: जोन जे ग्रेग मा एक अनुभवी लेखक हो essaywriter.nyc जहाँ उसले विद्यार्थीहरुलाई उच्च ग्रेड प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, उहाँ पढ्न र गिटार बजाउन को शौक छ। खैर, जोन एक धेरै यात्रा र सम्भव भएसम्म धेरै देशहरु भ्रमण गर्ने सपना देख्छन्।
A कसरी एक तयार व्यापार किन्न र मूर्ख हुन छैन
3 कसरी एक लोगो बनाउन को लागी सुझाव छ कि 2021 मा तपाइँको ब्रान्ड को बारे मा बोल्छ
यो अझै प्रिन्ट विज्ञापन रोक्न समय छैन
ल्याब कलर स्पेस के हो? र तपाईलाई यसको बारेमा के थाहा हुनुपर्छ?
एक आदर्श पुन: सुरुवात कसरी डिजाइन गर्ने